Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → mars → 7 → Moramanga : Zaza enina taona naolan’ny dadatoany
Ny 24 febroary teo no nisehoan’ny tantara tany amin’ny tanàna iray antsoina hoe Ampangalatsary any amin’ny kaominina Andasibe Moramanga. Raha iny avy nianatra iny mantsy i Angela, tovovavy kely ho feno enina taona rahampitso 8 martsa, dia nilalao teo antokotany. Ny vaovao nampitain’ny fianakaviana no nahalalana fa nisy niantso izy izay tsy iza fa ny dadatoany. Tsy nanampo ity zaza fa dia nanatona soa aman-tsara. Ny vaovao voaray hatrany no hilazana fa raha vao tafiditra tao an-trano anefa dia nohidiny ny varavarana ka tamin’izany no nanamparany ny filàny. Amin’ny maha zaza azy moa dia nanohy ny nilalao teny an-tokontany ihany izy fa noho ny avy eo kosa nahatsiaro tena tsy dia salama loatra ka nanatona an-dreniny . Teo vao vaky ny resaka, satria notantarain’ilay zaza an-dreniny avokoa ny zava-nitranga rehetra nataon’ ity dadatoany taminy.
Raiki-tahotra sady menatr’olona ity reniny, ka nanatona ity anadahiny ny amin’ny tranga izay niseho teo. Vetivety dia nahoraka tao an-tanàna ny zava-niseho, satria be dia be koa ry zareo no mpihavanana ka tonga dia nivory avy hatrany. Tamin’io andro io, tsy tao an-toerana ny rain’ilay zazavavy kely. Nanapakevitra ary ny teo anivon’ny fianakavian’ny reniny fa hafenina ny rainy ity tranga ity. Tsy nety tamin’ny eritreritr’ilay ramatoa anefa ny hitahiry izany tao an-tsainy ka dia voatantarany am-badiny ihany ny raharaha. Nisendaotra no sady nalahelo rangahy ka nilaza ny tsy hanaiky fa hitondra ny raharaha eo anatrehan’ny fitsarana. Teo no nanomboka niseho ny olana ,satria ny ankilany aty amin’ny fianakavian’ny reniny manakana mafy ny hanaovana raharaham-pihavanana, etsy andaniny kosa anefa ity rainy tsy manaiky fa hampiakatra ny raharaha eny amin’ny fitsarana.
Namarinin’ity raim-pianakaviana tafaresaka taminay moa fa maro tokoa ny trangan-javatra mitovitovy amin’izao ka rehefa mitranga ilay izy dia lasa ifanakonan’ny fianakaviana ary dia mijanona hatreo. Eto kosa anefa ilay ray manana ny zanaka vavy simba dia manankina ny raharaha eo anatrehan’ny fahendren’ny fitsarana. Marihina fa kambana mianadahy ity zaza ity ka Angelo no anaran’ity anadahiny. Manafintohina azy koa ny karazana teny eso mandrangitra ataon’ireto fianakavian’ny nahavanon-doza. Efa natolotra ny fitsarana ny raharaha.